नेपाल आईडलका प्रतिस्पर्धी बिक्रम बरालको घरमा पुग्दा यस्तो देखियो (भिडियो सहित), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेपाल आईडलका प्रतिस्पर्धी बिक्रम बरालको घरमा पुग्दा यस्तो देखियो (भिडियो सहित)
पोखरा । पोखराको भिमसेन टोलमा पुरानो घर छ, वरिपरी भएको ठूला–ठूला संरचनाको अगाडी उक्त घर पुरानो र भत्किन लागेको जस्तो देखिन्छ तर त्यही घरमा बिगत १६ बर्ष देखी एउटा परिवार भाडामा बस्दै आएको छ।
एपीवान टेलिभिजनबाट प्रशारण भैरहेको नेपाल आईडल सिजन २ मा उत्कृष्ठ पाँच प्रतिष्प्रर्धी हरेका छन् । त्यी मध्ये पोखराबाट बिक्रम बरालले प्रतिनिधित्व गर्दै छन्।
पोखराको भिमसेनटोलमा भाडामा बस्दै आएका बिक्रमको पुर्खौली घर पर्वत हो तर पनि बिगत दुई दशक देखी पोखरालाई कर्मथलो बनाउँदै उनको परिवार बस्दै आएको छ।
पोखरेलीहरु बिक्रम बराललाई नेपाल आईडल बनाउने उत्सुक छन् । बिक्रमका संगीत गुरु नवराज बरालको संयोजकमा बिक्रम बराल जिताऔं अभियान नै संचालनमा ल्याएका छन्।
पारिवारको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेका बिक्रमको लागी सहयोग रकम जुटाउन र आफन्त, शुभचिन्तकहरुलाई अनुरोध गर्न बाहेक अरु बिकल्प छैन । उत्कृष्ट चारमा पर्नको लागी बिहीबारको प्रस्तुती र बिहीबार राती ८ः३० बजेबाट शुक्रबार दिउँसो १२ बजे सम्मको भोटले निर्धारण गर्ने छ।
उनको परिवार, आफन्तजन, शुभचिन्तक र सारा नेपाली नै बिक्रम बराल अर्को चरणमा प्रवेश गर्नेमा आशाबादी छन्। हामी बिक्रम बरालको घरमा पुग्दा जे देखीयो जस्ताको जस्तै प्रस्तुत गर्दै छौं।